Users in3Cities Can Pay Electricity Bills via Mobile Banking in July | Myanmar Business Today
HomeBusinessUsers in3Cities Can Pay Electricity Bills via Mobile Banking in...
AYA Bank signed an agreement with the Ministry of Electricity and Energy in the first week of this month to allow users in Yangon, Mandalay and Naypyidaw pay electricity bills via AYA iBanking, AYA mBanking or AYA Pay.
The bank will charge K200 for the service, which helps users reduce time and energy spent queuing up at the office to pay the bill in person.
However, the online payment service at the moment cannot be used for overdue bills. The bank said it is working on the service to allow such overdue bill payment.
လာမည့် ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ မြို့ကြီး၃မြို့ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်တို့တွင် မီတာခ ပေးဆောင်ခြင်းကို ဧရာ၀တီဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာ၀တီဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ မြို့၃ခုမှ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သူများ မီတာခကို အွန်လိုင်းမှ ပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ယခုလပထမအပတ်တွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဧရာ၀တီဘဏ်တို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အဆိုပါ သဘောတူညီမှုအရ AYA iBanking, AYA mBanking, AYA Payတို့မှတစ်ဆင့် မီတာခ နှုန်းထားများကို ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်နိုင်သည့်အတွက် ပြည်သူများအနေဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ သွားလာစရိတ် သက်သာခြင်း၊ လူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း အစရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မီတာဘေလ်ကို အွန်လိုင်းမှ ပေးဆောင်မည်ဆိုပါက ၀န်ဆောင်ခအနေဖြင့် ဘဏ်သို့ ၂၀၀ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မီတာခ ပေးဆောင်မည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတိုင်း ပေးဆောင်ရမည့် မီတာဘေလ်များကိုသာ ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်မှ ပေးဆောင်မည့် မီတာဘေလ်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရက်ကျော်မီတာဘေလ်များ ပေးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ယင်းဘေလ်များပါ ပေးဆောင်နိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleMinistry Invites Tender Application for Karaweik Palace
Next articleMyanmar workers in Japan entitled to enjoy basic benefits